Iyo yazvino vhezheni yeOS X inosvika, Xiaomi anoda kukwikwidza neMacBook, iyo Apple Pay inoshanda muFrance uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac | Ndinobva mac
Iyo yazvino vhezheni yeOS X iri pano, Xiaomi anoda kukwikwidza neMacBook, iyo Apple Pay inoshanda muFrance uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
Peter Rhodes | | Apple Music, Apple Pay, Noticias, Mac makomputa, OS X El Capitan, Apple zvigadzirwa
Imwezve vhiki kunouya kuunganidzwa kwemashoko kwawanga wakamirira. Kana iwe usingakwanise kutiverengera mukati mevhiki kana iwe uchida kuzorodza zvishoma zvese zvakaitika pamusoro peapuro yakarumwa, MuSoy de Mac takagadzirira kusangana kwekupedzisira kwemwedzi waChikunguru.
Ichokwadi ndechekuti kunyangwe hazvo isu tiri munguva yezororo kune vazhinji, avo veCupertino vanoenderera nerwiyo rwekushanda kwatakajaira uye nhepfenyuro yenhau svondo rino inotsigira. Ngatitangei nekuunganidzwa kwemashoko.
Isu tinomira kwekutanga munhau dzakataura nezve svondo rino Apple yakaburitsa yazvino vhezheni ye OS X, vhezheni 10.11.6, vhezheni inongouya kugadzirisa zvikanganiso, ita kugadzirisa zvimwe zvinoshandiswa uye kunatsiridza mashandiro, mukati mezvinokwana. Kufunga nezve kuti munaGunyana ichave apo Apple inoburitsa nyowani macOS Sierra, vhezheni 10.11.6 iyo yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino ichave yekupedzisira inotarisirwa kubva kuhurongwa uye ndiyo Apple Ini ndaizovhara iyo programme imwechete kuti ndirasire mune iyo nyowani macOS Sierra.
Mazuva akazotevera nhau dzakauya dzichitsika-tsika, zvine simba kwazvo, dzichiratidza kuti, pakupedzisira, Apple Pay yakasvika muFrance. Yakanga iri nyika yakasara kuvhurwa yevatatu avo vakataurwa mune yakakosha yeiyo yekupedzisira WWDC munaJune uye nyika yakavakidzana. Iwe unotova nesarudzo yekubhadhara uchishandisa iyi yakanaka Apple Pay nzira yekubhadhara. Zvino izvo zvatinofanirwa kuona ndeizvo zvingave zviri zvinotevera nyika kuti ive ino yakasununguka uye yakachengeteka inoshanda yekubhadhara system
Wakambonzwa nezve iyo laptop yaunoda kuunza kumusika Xiaomi? Kune chero munhu anga asinganyanye kufarira zvigadzirwa izvo gore rimwe nerimwe rinopa iyo chinese brand Xiaomi, hauzoshamiswa kana ndikataura izvozvo "Zvinenge zvese zvishandiso zvemuchina zvinofemerwa neApple". Kufanana nemamwe makambani mazhinji aripo, zvigadzirwa zveapuro zvinokurudzira uye kutyaira tekinoroji bhizinesi mazuva ano. Ino nguva, Xiaomi haizounze imwe dombo reiyo iPhone. Panzvimbo iyoyo, zvakaburitswa kuti iyo femu ichatangisa yakaenzana neApple's 12-MacBook, zvinoenderana nezvinotsanangurwa kusvika parizvino.
Idzi dzinotevera nhau dzaive dzakagadzirirwa kune vanogadzira mafomu eMac uye ndeyekuti vhiki ino yakaitwawo kuti iwanikwe kwavari Safari 10 yekuvandudza yechitatu beta. Safari 10 yekuvandudza beta 3 inowedzera kuvandudzwa kwakasiyana uye chokwadi ndechekuti kambani inowanzo kuzivisa iko kugadziridzwa mune idzi dudziro uye rondedzero yacho inonakidza kwazvo maererano nekuwedzeredzwa kwakawedzerwa. Ngatione kuti iyi vhezheni itsva inotipei uye chii chinogadziriswa mukuwedzera kune zvakajairika zvikanganiso uye mhinduro yematambudziko apfuura.
Kana zviri zveApple Music, Apple inoramba ichitora nhanho diki dzinoitisa sevhisi yekushambadzira mimhanzi ichiwedzera kufarirwa. Ino nguva Apple yagadzira chibvumirano naTravis Scott kuburitsa dambarefu idzva chete. Apple Music iri kufamba-famba zvakanyanya, uye kwete kungo gadzira dhizaini uye kutaridzika. Sezvatakazivisa Chipiri chapfuura, kune maartist maartist anotanga kutamba mimhanzi yavo chete paApple Music. Sekare Katy Perry zvaakaita newake single "Simuka"Nhasi kuchinjana kweye mudiki asi anozivikanwa uye anoyemurwa rapper.
Apple inoenderera mune gumi nematatu nema maneuvers ayo anoita nzira yekubhadhara nhare Apple Pay ramba uchipararira. Vhiki rino rakasarudzwa naApple ku Apple Pay yakasvika pakupedzisira kuFrance saka tinogona kuve nechokwadi chekuti ichasvika kuSpain munguva pfupi.
Zvakanaka, Apple yakatanga mushandirapamwe mutsva apo paunoenda kune imwe yeApple Stores uye wotenga zvekushandisa kana chigadzirwa, zvichaitwa nevashandi kukubvunza kana iwe uchida kubhadhara neApple Pay kuburikidza ne iPhone yako kana yeApple Watch yako. Kana iwe usina Apple Pay yakagadzirirwa pane zvishandiso zvako, vashandi vemuchitoro vanokutungamira nenzira iyi.
Uye isu tinopfiga kuunganidzwa kwanhasi nenhau dzekuti shanduko ye macOS Sierra 10.12 inoramba ichienderera kumberi apo isu tinosvika pazvinogona kuitika pamutemo kuvhurwa kwesystem nyowani. Mushure mekuuya kwe beta 3 yevagadziri kutanga kwesvondo rino, Apple yakagadzira inodhindisa beta 2 kune vanoedza yakanyoreswa muApple Beta Chirongwa. Iyi nyowani beta 2 iri yakafanana neBeta 3 yevagadziri. Nayo, vashandisi vane mukana we pindirana nekuvandudza kwese, kusanganisira kumwe kuyedzwa kuti uone kuti kukanganisa kweshanduro dzapfuura kwakagadziriswa.
Uye kusvika parizvino kuunganidzwa kwenhau svondo rino, ndokuona mumazuva manomwe uine nhau nyowani dzinozokodzera kuyeukwa muchinyorwa chakadai. Nakidzwa nezvasara zveSvondo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yazvino vhezheni yeOS X iri pano, Xiaomi anoda kukwikwidza neMacBook, iyo Apple Pay inoshanda muFrance uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
Iyo iPhone 7 ichatarisana neApple nezano rine njodzi
iPhone 7: pamwe Apple inonetsa kupfuura terminal